यस्ता तरिका अपनाएर आफ्नो प्रेम सम्बन्धलाई मजबुत बनाउनुहोस्। - यादका टुक्रा
यस्ता तरिका अपनाएर आफ्नो प्रेम सम्बन्धलाई मजबुत बनाउनुहोस्।
2 years ago 3075 Views
खैर, हरेक सम्बन्धमा सानातिना नोकझोक अनि झगडा त हुन्छन नै , तर कहिलेकाँही तिनै साना कुराले पनि तपाईको सम्बन्धमा फाटो ल्याउँछ। वास्तवमा सारा कुरा विश्वासमा भर पर्छ। यदि तपाईंको सम्बन्धको आधार विश्वासमा टिकेको छ भने तपाईंको सम्बन्ध सँधै स्थिर रहनेछ। यहाँ हामी तपाईंलाई केहि रिलेसन सम्बन्धी सल्लाहहरू प्रस्तुत गर्दैछौं, जुन तपाईंको सम्बन्धलाई सँधै बलियो बनाउन मद्दत गर्दछ। आउनुस हामी उनीहरूको बारेमा जानौं।
एक सम्बन्ध मा भरोसा हुनुपर्छ भनेर त जसले पनि भन्छ, तर यसलाई कायम राख्न भने धेरै गाह्रो छ। तपाईं सधैँ आफ्नो दिमागमा राख्नुहोस् कि तपाइँको हरेक कार्यले तपाइँ दुई बीचको सम्बन्ध सुदृढ पार्नु पर्छ न कि खराब बनोस। सदैब एकअर्काको विश्वास बढाउने मात्र काम गर्नुहोस्। तपाईको सम्बन्धलाई सुदृढ पार्न यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। कुनै पनि कारणको लागि भएपनि एकापस बीचको कुराकानी रोक्नुहुन्न। जब एकापस बिचमा कुराकानी रोकिन्छ, तपाईं बीचको दूरी पनि बढ्छ। त्यसैले कुराकानी जारी राख्नुहोस्। अरूलाई माया गर्नु भन्दा पहिले आफैंलाई माया गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ। आफैलाई प्रेम गरेर मात्र तपाईं अरूमा आफ्नो प्रेम फैलाउन सक्नुहुन्छ। यो गर्नाले तपाइमा प्रेमको डर पनि हराउँछ। जब आफैंलाई माया गर्ने दुई व्यक्तिहरु एक अर्कालाई भेट्छन्, तिनीहरुको सम्बन्ध अरु मानिसहरुको भन्दा गहिरो हुन्छ।
कहिलेकाँही, सम्बन्धको सुरूमा हामी झूट बोल्छौं र पछि यो झूटले हाम्रो साथीको विश्वासलाई मार्छ। यस प्रकारका सम्बन्धहरू लामो समय सम्म रहँदैनन्। त्यसैले, सधैं आँफु र आफ्नो पार्टनरको साथ इमानदार हुनुहोस्। यस तरिकाले तपाईंको सम्बन्ध अझ बलियो बनाउन सक्नुहुन्छ। प्रेम भाव दर्शाउनको लागि शारीरिक स्पर्शले ठुलो भूमिका खेल्दछ। स्पर्श प्रेमको एउटा भाषा हो। स्पर्श बिना प्रेम दर्शाउन बहुत मुस्किल हुनेगर्छ। सानो बच्चालाई पनि जवसम्म तपाईं छोएर उसलाई प्रेम दर्शाउनु हुन्न तबसम्म ऊ सन्तुष्ट हुँदैन। साँचो प्रेमको अभिव्यक्तिको लागि स्पर्शको महसुस हुन बेहद जरुरि हुनेगर्छ। शारीरिक स्पर्शको मतलब मात्र यौनजन्य क्रियाकलाप हुँदैन। तपाईं जव आफ्नो पार्टनरलाइ प्रेमले अंकमाल या स्पर्श गर्नुहुन्छ तब तपाईंहरु बीच प्रेमको भाव साटासाट हुन्छ, जुन मुखले बोलेर साट्न असम्भव हुनेगर्छ।
तपाइँ तब प्रेमको महसुस गर्नुहुन्छ जब तपाइंलाई कसैले मदत गर्छ। पार्टनरको बिचमा यो जरुरि हुन्छ कि एकअर्कालाई जरुरत पर्दा उसको मदत गरियोस। यस्ता जरुरतहरु धेरै प्रकारका हुनसक्छन। कुनैबेला कसैलाई पैसाको जरुरत होस् या बिरामी परेर सहयोगको आवस्यकता होस्। यस्तो बेलाको मदतले तपाईंहरुको प्रेममा बलियो पिल्लरको काम गर्छ अनि सजिलै टुट्न दिदैन। हरेक मान्छे चाहन्छ कि उसको प्रेम स्वीकार भैदियोस्। आफ्नो पार्टनरले खुलेर भनोस् कि ऊ माया गर्छ। धेरै मान्छेहरु माया त गर्छन्, तर खुलेर त्यसलाई भन्न भने हिचकिचाउने गर्छन्। यसो हुँदा आफ्नो पार्टनरले यसलाई गलत तरिकाले बुझ्न सक्छ। उसले प्रेम नै गर्दैन कि भनेर संका गर्ने स्थिति बन्न सक्छ। प्रेम सम्बन्ध बलियो बनाउन आफ्नो पार्टनरलाई स्पेसल फिल गराउन जरुरि हुन्छ। जव आफ्नी प्रेमिकालाई तपाई भन्नु हुन्छ कि “तिमि साह्रै सुन्दर देखिएकी छौ, तिमि जस्तो सुन्दर अरु कोहि छैन” तब उनि धेरै खुशी हुनेछिन्। अनि तपाईं प्रति उनको भरोशा बढेर जान्छ। केटि मात्र हैन केटा पनि आफ्नो प्रेमिकाबाट यो सुन्न चाहन्छन् कि “ऊ साँच्ची राम्रो छ, उसले आफ्नो करियर अनि लाइफमा राम्रो गरिरहेको छ अनि ऊ आफ्नी प्रेमिकाको लागि एउटा हिरो सरह हो।”
एकअर्का संग क्वालिटी टाइम बिताउनुहोस। क्वालिटी टाइमको मतलब यो हो कि, जसलाई तपाईं प्रेम गर्नुहुन्छ ऊ तपाईं प्रति पूर्ण रुपले समर्पित होस्। तपाइँहरु एकअर्काको कुराहरुलाई साँच्चीकै सुन्नुहोस अनि बुझनुहोस्। एकअर्का संग नजर जुधाउदै प्रेमिल गफ गर्नुहोस अनि समय बिताउनुहोस। यसरि आपसमा सुन्दर समय बिताउँदा एकअर्कामा प्रेम अनि बिश्वास बढेर जान्छ।
Don't Miss it साँचो प्रेम हो या मात्र आकर्षण भनेर कसरि थाहा पाउने ?
Up Next प्रेम जताउन ‘I LOVE YOU’ भन्नु भन्दा पनि प्रभावकारी हुन्छन् यी बाक्यहरु।
ओठमा चुम्बन गर्नुले रोमान्टिक जनाउँछ कि अरु नै केहि ?
हामीकहाँ खुलमखुला चुम्बन गर्नु त्यती शोभनिय मानिदैन । भनिन्छ, ‘छ्या कस्तो लाजमर्दो !’ जबकी चुम्बनलाई प्रेम अभिव्यक्तको माध्याम मानिन्छ ।…
4 weeks ago 464 Views
के विवाह नगरी पनि प्रेम मात्रै गर्न सकिदैन ?
प्रेम गरेपछि विवाह गर्नैपर्छ ? यो प्रश्नले जवाफकर्तालाई दुई कित्तामा उभ्याउँछ । एकथरी भन्छन्, प्रेम र विवाह दुई फरक कुरा…
4 weeks ago 1171 Views
लभ गर्ने वा गरिरहेको जुनै मान्छेले यस्तो गर्छ गर्छ
आफुले जसलाई माया गरेको हो, उनले पनि माया गरोस् भन्ने चाहन्छौं । तर, कसैले आफुलाई माया गरिरहेको छ भनेर कसरी…
4 weeks ago 1354 Views
लिभ इन रिलेसनमा बस्नु भन्दा अगाडी के थाहा पाउनु पर्छ ?,
लिभ इन रिलेशनमा रहनु सामान्य जस्तै भएको छ । मन मिल्ने जोडी विवाह नगरी एकसाथ बस्ने गरेका छन् । यसरी…
1 month ago 533 Views
थरीथरीका दम्पतिहरु पढ्दा पनि अचम्म लाग्ने
कोही दम्पती यस्ता हुन्छन्, जो निकै मिलेको देखिन्छन् । तर, सानो निहुँमा उनीहरुबीच झगडा पनि हुन्छ । भनौं, उनीहरुको सम्बन्ध…
अपनाउनुहोस् खुसी हुन यी १२ स्वस्थ तरिकाहरु,
जीवनमा खुसी हुन सकिएन भने अरु सबैकुरा बेकार लाग्छ । अर्थात खानपित, मोजमस्ती, भेटघाट, घुमफिर, स्वास्थ्य सबै राम्रो हुन्छ जब…
1 month ago 1327 Views
सासु ससुरालाई बाउआमा जस्तै बनाउने भए यति गरे पुग्छ, जीवन नै सजिलो पो हुन्छ
रमिताको सासु-ससुरासंगै भएर पनि उनलाई अञ्जान व्यक्ति झैं व्यवहार गर्छन् । रमिताले प्रसस्त प्रयास गर्दा पनि उनीप्रति सासु-ससुराको व्यवहारमा परिर्वतन…
8 months ago 392 Views
चाउचाउ खाइरहनु हुन्छ भने यो पढ्नै पर्ने कुरा हो
3 months ago 2669 Views